Esi mee | January 2020
Kedu ka esi ede nọmba n'ime Ụlọ Ọrụ Libra
Office Office bụ nnukwu nhọrọ ọzọ na Okwu Microsoft Office a ma ama. Ndị ọrụ na-achọ ọrụ nke LibreOffice nakwa karịsịa na eziokwu a bụ n'efu. Na mgbakwunye, enwere ọtụtụ n'ime ọrụ ndị dị na ngwaahịa ahụ sitere na ụwa dị ukwuu, gụnyere ọnụ ọgụgụ nke ibe.
Wepụ kpam kpam Avira antivirus na kọmputa gị
Mgbe wepu antivirus Avira, enweghi nsogbu. Ma mgbe onye ọrụ ahụ gbalịrị ime ka enyi gị chebe ya, mgbe ahụ, ihe ijuanya na-enweghị atụ na-amalite. Nke a bụ eziokwu ahụ na ọkachamara Windows ọkachamara enweghị ike ihichapụ faịlụ niile nke usoro ihe omume ahụ, nke ahụ na - emebikwa ya na ntinye nke usoro nje virus ọzọ.
Nsogbu na mbido nke nchọgharị nyocha
Ndị ọrụ nke Tor nchọgharị na-ahụkarị nsogbu na-agba ọsọ usoro ihe omume ahụ, bụ nke a na-ahụkarị mgbe ọ kwalitere ọhụrụ. Idozi nsogbu na mmalite nke usoro ihe omume a ga-adabere na isi iyi nke nsogbu a. Ya mere, e nwere ọtụtụ ihe mere Thor Browser anaghị arụ ọrụ. Mgbe ụfọdụ, onye ọrụ ahụ anaghị ahụ na njikọ Ịntanetị agbaji (pinyere ma ọ bụ wepụ eriri, Internet ejirila kọwaa na kọmputa ahụ, onye na-enye ọrụ ekweghị na Ịntanetị, mgbe ahụ edozi nsogbu ahụ n'ụzọ doro anya na n'ụzọ doro anya.
Otu esi ewepụ Adguard kpam kpam na kọmputa gị
N'ihi ọtụtụ mgbasa ozi n'ịntanetị, mmemme na-egbochi ya na-aghọwanye ndị ọzọ. Onye na-eche nche bụ otu n'ime ndị nnọchiteanya kachasị mma nke ngwanrọ dị otú ahụ. Dị ka ngwa ọ bụla ọzọ, a ghaghị iwepụ Adguard site na kọmputa. Ihe kpatara nke a nwere ike ịbụ ọtụtụ ihe. Ya mere, olee otú o si dị mma, ma kachasị mkpa, wepụ kpamkpam Adguard?
Wepụ Vulcan Casino Ads Iji Malwarebytes AntiMalware
Ọtụtụ ihe ntanetị maka nkwado ha na-eji usoro na-ekwesịghị ekwesị nke mgbasa ozi, tinyere ndị dabere na teknụzụ nje. Ọ bụ teknụzụ ndị a na-eji mgbe ị na-akpọ Vinox online casino. Ọrịa ahụ na-abanye na nchọgharị onye ọrụ, mgbe nke a na-amalite ịmalite windo windo na-akpọsa cha cha chaa.
Akwụkwọ na-edozi na OpenOffice Writer. Isiokwu nke ọdịnaya
N'ime akwụkwọ eletrik dị ukwuu, nke gụnyere ọtụtụ peeji nke, ngalaba na isi, nchọpụta maka ozi ndị dị mkpa na-enweghị nhazi na ọdịnaya nke ọdịnaya dị ka nsogbu, ebe ọ bụ na ọ dị mkpa iji ịgụghachi ihe ederede. Iji dozie nsogbu a, a na-atụ aro ka ị rụọ ọrụ dị iche iche nke ngalaba na isi, mepụta ụdị maka edemede na isi okwu, ma jikwa ihe dị n'ime tebụl na-akpaghị aka.
Otu esi eji iTools
A na-arụ ọrụ kachasị mfe n'etiti kọmputa na ngwa Apple (iPhone, iPad, iPod) site na iji usoro iTunes pụrụ iche. Ọtụtụ ndị na-eji kọmputa na-agba ọsọ na sistemụ arụmọrụ Windows na maka sistemụ arụmọrụ a, iTunes adịghị iche na arụmọrụ ma ọ bụ ọsọ.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na Corel Draw amaliteghị
Dịka usoro ihe omume ọ bụla, Corel Draw nwere ike ime ka nsogbu dị na onye ọrụ mgbe mmalite. Nke a bụ obere okwu na-adighi mma. N'isiokwu a, anyị ga-atụle ihe kpatara omume a ma kọwaa ụzọ ndị nwere ike isi dozie nsogbu a. Ọtụtụ mgbe, a na-ejikọta mmemme nke usoro ihe omume ma ọ bụrụ na nrụnye na-ezighị ezi, mmebi ma ọ bụ enweghị faịlụ nke usoro ihe omume ahụ na ndekọ ahụ, nakwa yana mgbochi maka ndị ọrụ kọmputa.
HDD Regenerator: Ịrụ ọrụ Ntọala
N'ụzọ dị mwute, ọ dịghị ihe na-adịru mgbe ebighi ebi, gụnyere ngwa ngwa kọmputa. Ka oge na-aga, ha nwere ike ịdaba n'ọnọdụ dị otú ahụ na-adịghị mma dị ka demagnetization, nke na-eme ka ọdịdị nke ndị ọjọọ pụta, ya mere nkwụsị nke arụmọrụ. Ọ bụrụ na nsogbu ndị dị otú ahụ, ihe eji eme ihe HDD Regenerator ga-enyere aka weghachite diski ike nke kọmputa 60% nke oge ahụ, dị ka ndị mmepe.
Jiri okwu mgbe niile na Notepad ++
Mmemme a bụ ihe mgbagwoju anya, ihe nrụgide, na mgbe niile, nke ọ na-abụghị ihe ọhụrụ ịmeghachi otu, ma ọ bụ ihe yiri ya. Iji mee ka ịchọta ma gbanwee ọchụchọ ahụ ma dochie ihe ndị yiri ya na akwụkwọ, a na-emepụta usoro nkwupụta oge niile na mmemme.
Etu esi tinye fon na CorelDRAW
CorelDRAW bụ otu n'ime ndị editọ vector ndị kasị ewu ewu. Ọtụtụ mgbe, ọrụ na usoro ihe a na-eji ederede na-enye gị ohere ịmepụta akwụkwọ ozi mara mma maka logos na ụdị ihe oyiyi ndị ọzọ. Mgbe ọkọlọtọ ọkọlọtọ adịghị adaba na ngwekọ nke ọrụ ahụ, ọ ga-adị mkpa iji nhọrọ ndị ọzọ.
Esi ewepu Adobe Reader DC
Ụfọdụ mmemme nwere ike agaghị ewepu na komputa ma ọ bụ ehichapụ na-ezighị ezi site na iwepụ ntụziaka site na iji ngwaọrụ Windows. Enwere ike inwe ihe di iche iche maka nka. N'isiokwu a, anyị ga-achọpụta otú ị ga-esi wepụ Adobe Reader n'ụzọ ziri ezi site na iji usoro Revo Uninstaller. Download Revo Uninstaller Esi wepu Adobe Reader DC Anyị ga-eji usoro revo Uninstaller n'ihi na ọ na-ewepu ngwa kpamkpam, na-enweghị ahapụ "ọdụ" na nchekwa usoro na ndekọ njehie.
Na-eme ihe nlereanya na ihe ngosi
Ụkpụrụ bụ ụkpụrụ na-agụnye ọtụtụ ụdị, mụbaa foto. Ihe osise nwere ike inwe agba dị iche iche, dịgasị iche iche, na-agbanwegharị n'akụkụ dị iche iche, mana ha ga-adịgide adịgide na ibe ha, nke mere na ha ga-ezuru ibu, ụfọdụ gbanwere nha, agba ma gbanwee n'ụzọ dị iche na ọkwa dị iche.
Ntuziaka zuru ezu maka overclocking na processor
Imechi ihe nhazi ahụ dị mfe, ma ọ chọrọ ụfọdụ ihe ọmụma na ịkpachara anya. Ihe omumu nke ihe omumu a na enyere gi aka inwe mmasi nke oma, nke ufodu mgbe ufodu. N'ọnọdụ ụfọdụ, ịnwere ike igbochi onye nhazi ahụ site na BIOS, ma ọ bụrụ na atụmatụ a anaghị adị ma ọ bụ na ịchọrọ iji aka gị rụọ ọrụ n'okpuru Windows, mgbe ahụ ọ ka mma iji ngwanrọ pụrụ iche.
Ịwụnye ihe nchọgharị na-ewu ewu na kọmputa gị
Ugbu a ọ fọrọ nke nta ka onye ọrụ kọmputa ọ bụla nwee ohere ịntanetị. A choro ihe di iche iche n'ime ya site na ihe nchọgharị weebụ. Ihe omume ọ bụla a na-arụ n'otu ụkpụrụ ahụ, ma dị iche na interface na ngwaọrụ ndị ọzọ. Taa, anyị ga-ekwu banyere otu esi etinye ihe nchọgharị na PC gị.
Ịtọ usoro ihe omume CCleaner
Onye nchịkọta ihe omume - ihe kachasị ewu ewu maka ihichapu kọmputa gị site na mmemme ndị na-adịghị mkpa na ikpokọta irighiri ihe. Usoro ihe omume a nwere ngwá ọrụ dị iche iche ga-ehichapụ kọmputa ahụ kpamkpam, na-arụ ọrụ kachasị mma. Isiokwu a ga-atụle isi ihe nke usoro ihe omume ahụ.
Na-agụ akwụkwọ na fb2 na Caliber
Isiokwu a ga-egosi gị otu esi mepee akwụkwọ na sistemụ .fb2 na kọmputa gị site na iji usoro mmemme nke Caliber, nke na-enye gị ohere ime nke a n'egbughị oge na n'enweghị nsogbu ndị na-enweghị isi. Caliber bụ akwụkwọ nchekwa nke akwụkwọ gị, nke ọ bụghị naanị na-aza ajụjụ ahụ "otu esi emeghe akwụkwọ fb2 na kọmpụta?", Ma ọ bụkwa ọbá akwụkwọ gị.
Nbudata ihe nkiri na MediaGet
Media Geth bụ ihe kachasị adaba na nke kachasị dị irè na oge ndị ahịa. Na ya, ị nwere ike ibudata faịlụ dịgasị iche iche na Ịntanetị site na mmiri na ọsọ ọsọ, ma n'otu oge ahụ, ọ nwere ọtụtụ uru ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, n'isiokwu a, anyị ga-enyocha otú ị ga-esi budata ihe nkiri site na iji MediaGet.
Ọtụtụ ndị ọrụ RaidCall na-ewe iwe site na nnukwu mgbasa ozi na usoro ihe omume ahụ. Karịsịa mgbe windo mmapụta wepụ n'oge kachasị - n'oge egwuregwu ahụ. Ma anyị nwere ike ịlụ ọgụ a ma anyị ga-agwa gị otu esi. Download ụdị RaidCall ọhụrụ ọhụụ Ka anyị lee anya iji gbanyụọ mgbasa ozi na RaidCall. Esi gbanyụọ ikike?
Esi edekọ webcam video na WebcamMax
Otutu ndi mmadu na-emekpa mmadu anya n'agbanyeghi ma o nwere ike igba video n'ime kamera komputa. N'eziokwu, a naghị enye ya na usoro ahụ. Otú ọ dị, site na enyemaka nke usoro dị mfe WebcamMax ọ na-aghọ ezigbo. WebcamMax bụ mmemme nwere njedebe nke na-enye gị ohere idekọ ma zoputa vidiyo site na kamera. O nwere ọtụtụ ọrụ bara uru, dịka ọmụmaatụ, dịka ntinye ụda n'oge, na iji jiri ya, ịkwesighi inwe ụdị ihe ọmụma nke ike nke kọmputa.
https://termotools.com ig.termotools.com © Esi mee 2020